तहखाने polypropylene: विनिर्देशों, समीक्षा
आज polypropylene को Cellars आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ कि एकदम साधारण उपकरणहरू साथै कटेज भित्र मान्छे धेरै छन्। यस्तो लेख खाली र उत्पादनहरु भण्डारण लागि सुविधाजनक छन्।
तहखाने polypropylene विभिन्न पर्यावरणीय मित्रता छ कि खाना ग्रेड प्लास्टिक को गरे। यो ईटा ठोस वा धातु बनेको उत्पादनहरु तुलना गर्न अनुमति दिन्छ ठूलो लाभ लागि। प्लास्टिक तहखाने प्रयोग गरेर, तपाईँले odors अवशोषित गर्छ कि छैन र जंग छैन एक उत्पादन प्राप्त। पर्खालहरु को सतह कार्यका बेला मोल्ड गठन गरिएको छ। डिजाइन, एक राउन्ड हुन सक्छ एक सिलिण्डर वा आयताकार आकृति अर्थात्। यो आन्तरिक कन्फिगरेसन आउँदा, तपाईं समतल, दीपक र सिढी को रूप मा थप उपकरण प्राप्त हुनेछ। यस्तो Cellars स्थापना जीवित कोठा, को ग्यारेज अन्तर्गत गर्न सकिन्छ वा तपाईं / बगैचा मा माटो मा मुर्दा गाड्नु सक्नुहुन्छ घर वरिपरि।
polypropylene को Cellars खाना को एक polypropylene वा पलीथीन पाना प्रयोग मार्गदर्शन वेल्डिंग द्वारा निर्मित छन्। मानक सुविधाहरू खोल नै,2टुक्रा को मात्रा मा वेंटिलेशन पाइप, साथै प्वाल समावेश गर्नुहोस्। यो एक आयताकार विन्यास, लम्बाइ 1200 देखि 1950 मिलिमिटरमा चौडाई दायरा 1200 देखि 2000. गर्न भिन्न हुन सक्छन् मिलिमिटरमा छ भने। उचाइ लागि, यो 1500 देखि 2000 मिलिमिटरमा सीमा बराबर हुन सक्छ। माथिको मापदण्डहरू सबै निर्भरता मा, रकम 2.2 8 घन मीटर हुन सक्छ।
संरचना उचाइ घाँटी बाहेक समावेश गर्दछ। उपभोक्ताहरु यो तत्व को एक मानक उचाइ रूपमा 300 मिलिमिटरमा छन् भनेर थाहा हुनुपर्छ। खरिद गर्नु अघि यो तहखाने अतिरिक्त धातु सिढी, प्लास्टिक समतल र दीपक छिंडीमा संग सुसज्जित गर्न सकिन्छ कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो सेट प्रति 1 मीटर 2500 rubles को दायरामा मान हुन सक्छ। प्लास्टिक समतल सामान्यतया आयाम बराबर 350x30h1000 मिलिमिटरमा छ। यस्तो लागि अतिरिक्त 2,000 rubles भुक्तानी गर्न हुनेछ। जो वोल्ट 220 मा संचालित को दीपक, 700 rubles लागत। तहखाने polypropylene पनि जो आधार, अर्थात् polypropylene वा polyethylene, साथै पर्खाल मोटाई को सामाग्री फरक हुनेछ फरक मूल्य, हुन सक्छ। तपाईं आयताकार आकृति को एक उत्पादन छनौट गर्ने निर्णय भने, प्लास्टिक देखि 10 15 मिलिमिटरमा लिएर एक मोटाइ हुन सक्छ।
एक सिलिण्डर तहखाने विशेषताहरु
माथि, उल्लेख रूपमा सिलिण्डर आकार तहखाने polypropylene मूल्यांकन जो, लेख देखाइएको छ सक्छ विशेषताहरु संग संयुक्त छन्। यस्तो संरचना पलीथीन आधारमा दुई-पत्र कुंडलित ट्यूब प्रयोग बाहिर निकालन वेल्डिंग प्रविधिले उत्पादन छन्। मानक सुविधाहरू, को आयाम जो 800x800 मिलिमिटरमा बराबर हो यो प्वाल समावेश आवास Cellars र माथि उल्लेख कि जस्तै रकममा ट्यूब निकास।
राउन्ड को Cellars को प्राविधिक विशेषताहरु
सही तहखाने राउन्ड खण्ड, 2400 मिमी 1800 देखि एक व्यास हुन सक्छ यसको उचाइ 2000 देखि 2500 मिमी र पर्खाल मोटाई गर्न भिन्न हुन सक्छन् - 40 60 मिलिमिटरमा देखि फरक हुन्छन्। प्रदान आयाम आधारमा, डिजाइन मात्रा511.5 गर्न घन मीटर देखि भिन्न हुन सक्छ। यस मामला मा, उचाइ पनि खातामा घाँटी को आयाम लिएर बिना उपलब्ध छ। यो लेख माथि वर्णन ती जस्तै थपिएको संग पूरा गर्न सकिँदैन कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
प्लास्टिक Cellars समीक्षा
तपाईं घरमा एक तहखाने स्थापना गर्ने निर्णय भने, यो पक्कै पनि विकल्प निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ जो मूल, थाह गर्न आवश्यक छ। उपभोक्ताहरु तिनीहरूले समय, पैसा र प्रयास को धेरै खर्च समावेश गर्दैन एक सुन्दर ड्राई तहखाने व्यवस्था गर्न सके यी उत्पादनहरू प्रयोग भन्न रूपमा। त्यसैले, तपाईं वातावरण सुरक्षित कोठा जो उत्पादन र खाली को स्थायी भण्डारण लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ प्राप्त गर्न व्यवस्थापन गर्नुहोस्। तल्ला, पर्खाल र छत आफूलाई द्वारा रहेका waterproofing समारोह प्रदर्शन गर्नेछन्। सम्मिलित प्राकृतिक वा बाध्य वेंटिलेशन polypropylene वा पलीथीन तयार तहखाने चाहेको microclimate गरेर। खरीदार उत्पादन संरचना अझ थप सुदृढीकरण करङहरु गरिएका छन् भन्छन्। प्रयोगकर्ता व्यक्तिगत आयाम अनुसार चाहेको यदि बनाइएको उपकरण आदेश गर्न सक्नुहुन्छ।
आधुनिक उपभोक्ताहरु झन् आफ्नो उद्यान वा देश घरहरू प्लास्टिक Cellars, आफ्नो राय, एक विशेष डिजाइन छ जसको लागि छनौट छन्। यसलाई राम्ररी अन्तरालमा भूमिगत लागि सिद्ध छ। corrode छैन सामाग्री, को छाप लागि काम गर्न अभिप्रेरित छैन, र 50 वा अब वर्षसम्म सेवा गर्न तयार छ। यस्तो लेखहरू विशेष गरी सजिलै देखिने छ सेवा, मा सुविधाजनक हुँदा सक्षम मोल्ड र वर्षा र जमीन पानी उजागर हो कि ठोस वा ईटा निर्माण संग एक तुलना।
तरकारी जस्तै Cellars जो आधुनिक माली को लिङ्कमा छ, माथि सुखाने बिना भण्डारण गर्न सकिन्छ।
polypropylene को तहखाने, जो को मूल्य 15 हजार rubles बराबर हुन सक्छ, यो घर वा बगैचा, शहर भित्र स्थित छ जसको लागि एक उत्कृष्ट समाधान हो। तपाईं प्लास्टिक तहखाने को स्थायित्व र पर्यावरण मित्रता र सुरक्षा मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ। किन यी उत्पादनहरू आज व्यापक छन् भन्ने छ। तिनीहरूको क्षेत्र र खरीदार उपलब्ध छन् कि उन्नत सुविधाहरूमा नेताहरूले गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई बीच, उदाहरणका लागि, व्यक्तिगत आकार अनुसार बनाइएको उत्पादन खरिद गर्ने मौका प्रदान गर्न सक्छन्। हाल को वर्ष मा एकदम अक्सर मालिक द्वारा तयार छन् जो एक गैर मानक योजना, द्वारा घरमा अप लाइन किनभने यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आवश्यक छ भने, तपाईं नियम अनुसार तहखाने सेट मदत गर्ने व्यवसायीक को मद्दत लिन सक्छ।
ईटा कच्चा: संरचना, गुण, निर्माण, प्रयोग
मेष एल्यूमीनियम - सुविधा र लाभ
देवदार Altai: विशेषताहरु र निर्माण मा प्रयोग
"छत" (जमीन बसाई सराई): विशेषताहरु, विधानसभा
कसरी बसाई सराई अन्तर्गत काठ तयार? को बसाई सराई अन्तर्गत घर पर्खाल कसरी ढाक्नु गर्न? "पट्टी अन्तर्गत" बसाई सराई
सजावटी मोहरा प्लास्टर - खत्म को सरल विधि
बेबी-डलर - सबै समय मा लुगा। इतिहास र मोडेल
बेकन र क्रीम संग Carbonara: नुस्खा
कजाख भोजन, आफ्नो सुविधा र गठन को इतिहास
एलर्जी dermatitis को उपचार
अब्खाजिया, को Kodori घाटी: वर्णन, इतिहास, आकर्षण र रोचक तथ्य
पोर्ट "777"। पोर्ट सस्तो सोभियत
विष प्रयोग बिना चिकन Coop मा चूहों को कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न?
आदिवासी अष्ट्रेलिया। Avstraliyskie Aborigeny - फोटो
इन्टरनेट मार्फत निःशुल्क डेटिङ - र विरुद्ध
Cloudberry जाम: एक नुस्खा। उत्पादन को उपयोगी गुणहरू
संगीन कुदाल - आधारभूत उपकरण गर्मी निवासी
ठूलो सपिङ्ग र "प्रदर्शनी केन्द्र" मा मनोरञ्जन केन्द्र - "सुनको बेबिलोन"
Copyright © 2018 ne.delachieve.com. Theme powered by WordPress.